Nantsi indlela yokongeza izikweko kwiBali lakho oza kuyithengisa | Martech Zone
Esona sikweko siqhelekileyo sisisebenzisa xa sithengisa iinkonzo zethu, sichaza inkqubo yethu, kwaye simisela okulindelweyo kunye nethemba lethu liyaxoxa utyalo. Ngokuphindaphindiweyo, siva kubaxumi abathi:
Sizamile [faka iqhinga lokuthengisa] kwaye ayisebenzi.
Uzamile ixesha elingakanani? Uqhube kakuhle kangakanani? Loluphi ubungakanani botyalomali olwenzileyo? Masixoxe ngengxowa-mali yomhlala-phantsi…
Isikweko sisebenza kakuhle kuba iingcali sele ziqondile ukuba utyalomali lusebenza njani- nokuba kukutyala imali esitokisini okanye ukubeka nje imali ecaleni kwi-401k. Ikwaseta nolindelo lwexesha elide lokuba kufuneka singonwabi okanye siphoxeke kwiindawo eziphakamileyo kunye nezisezantsi kodwa endaweni yoko sigxile ekuhambeni kwexesha elide. Izikweko ziyasebenza!
Into eyayiyinto yobugcisa bokucinga yeembongi ngoku sisakhono sonxibelelwano esibalulekileyo kuye nabani na ofuna ukuba nefuthe, ukuthengisa, okanye ukweyisela abanye.
le infographic evela ku-Anne Miller, Umqeqeshi wentetho kunye nentetho, uhambahamba ngazo zonke izibonelelo, ubuchule kunye nemizekelo yokuthengisa ngokukuko.
tags: IsikwekozekisoUkunika amandla ukuthengisaukuthengisamagama